Week Planner Diary, Organizer, Calendar, Daybook APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ရက်သတ္တပတ်စီမံရေးဒိုင်ယာရီ၊ စီစဉ်သူ၊ ပြက္ခဒိန်၊ နေ့စာအုပ်
Week Planner Diary၊ စီစဉ်သူ၊ ပြက္ခဒိန်၊ နေ့စာအုပ် APK
7-DAY အခမဲ့စမ်းသပ်ကာလ (ဆန္ဒရှိပါကအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးကာလပြီးနောက် $ 0,99) ။
သင်သည်ဤစာသားကိုဖတ်နေသည်ဆိုလျှင်စည်းရုံးရေးမှူးကောင်းကိုသင်ရှာဖွေနေသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! သင်တွေ့ပြီ။ Week Planner သည်သင်၏အချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီစဉ်သူသည်ဖြစ်ရပ်များကိုစီစဉ်ရန်နှင့်စီစဉ်ရန်နှင့်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တပတ်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုလိုပါကဤပြက္ခဒိန်သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
The Week Planner သည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောအွန်လိုင်းမန်နေဂျာဖြစ်ပြီးသင်၏အစီအစဉ်နှင့်အတွေးအခေါ်များကိုစနစ်တကျ၊ ၎င်းသည်သင်၏မှတ်စုစာအုပ်များ၊ စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းများ၊ စက္ကူစီစဉ်သူများနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုထိရောက်ပြီးအလွန်အသုံးဝင်သော application တစ်ခုတွင်စုစည်းထားသည်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်ခက်ခဲသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်ရှာမတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန်သင်သင်တန်းမလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ပတ်ပတ်လုံးကြည့်ရှုသူများနှင့်စီစဉ်သူများကိုအသုံးပြုနေလျှင်ဤလျှောက်လွှာသည်သင့်အတွက်သေချာသည်။
-“ နောက်ဆုံးတော့ !!! နောက်ဆုံးတော့ရှာနေတဲ့ဒိုင်ယာရီတစ်ခုကိုတွေ့ပြီ၊ ရိုးရိုးလေးပဲ။ ”
- "အရမ်းကောင်းတယ်။ ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ရမယ့်အစားငါ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုငါသိတယ်"
- "အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်။ စီစဉ်သူရဲ့အသွင်အပြင်ကိုငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ "
- "ဒီဟာကရိုးရိုးလေးနဲ့အသုံးဝင်တာကိုငါရှာတွေ့နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောစီစဉ်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းပဲ။ "
သင်၏ဒိုင်ယာရီ၊ ဖြစ်ရပ်များပြက္ခဒိန်နှင့်အလုပ်စာရင်းကိုအမြဲတမ်းသင့်လက်ထဲတွင်ထားခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။ သင်၏အချိန်ကိုလည်းတိတိကျကျစီစဉ်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုလည်းသွားနိုင်သည်။ လွယ်ကူသည်။ ရက်သတ္တပတ်မြင်ကွင်းသည်စီမံကိန်းအတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏အစီအစဉ်၏ဒီဇိုင်း၊ စာလုံးနှင့်စာသားအရောင်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုအဘယ်ကြောင့်စိတ်ကြိုက်မပြုပြင်သနည်း။ ထို့အပြင်၊ ပရိုဂရမ်သည်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများစွာကိုအထောက်အပံ့ပေးပြီးနေ့စဉ်၊ နှစ်ရက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လစဉ်ပြက္ခဒိန်သို့ပြောင်းသည်။ သင့်တွင်ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုရန်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
- Week Planner ကိုသင်၏ဂူဂဲလ်တိမ်တိုက် (သို့) အခြားကိရိယာများနှင့်စည်းညှိပါ။
- သင်၏ ID ကို Face ID နှင့် Face ID ဖြင့်ကာကွယ်ပါ။
- အလိုအလျောက် back-up စနစ်ကိုခံစားပါ။
Week Planner ကို အသုံးပြု၍ သင်၏အတိတ်မှတ်စုများကိုလနှင့်နှစ်များအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပြီးနေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်နှင့်နှစ်ပတ်လည်အဖြစ်အပျက်များကိုထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည်။
- သီတင်းပတ်၏ပထမနေ့ကိုရွေးချယ်ပါ။ တနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့။
- ရက်သတ္တပတ်မြင်ကွင်းကိုနှစ်ရက် (သို့) တစ်ရက်ကြည့်ပါ။
- သင်၏ကိရိယာ၏အဓိကဘာသာစကားအပေါ် မူတည်၍ မသုံးသောဘာသာစကားကိုရွေးပါ။
- မည်သည့်အဖြစ်အပျက်မျိုးကိုမဆို / ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်ရန်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်ပတ်လည်၊ ရက်စွဲအတိအကျ၊
- ပြီးစီးခဲ့သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်သို့မဟုတ်မလိုအပ်သော ၀ င်ရောက်မှုကိုဖျက်ပစ်ပါ။
- ဖြစ်ရပ်များနှင့် entries တွေကိုရှာဖွေရှာဖွေ;
- Entries တွေကိုအလိုအလျောက်သိုမဟုတ်“ အတင်းအဓမ္မ” ပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းပါ။
- Font အရောင်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သူအားပြောင်းပါ။
- ကူးယူခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းစသည်တို့ကို Entries;
- သင်၏ Entries များကို Backup နှင့် Sync လုပ်ပြီးစကားဝှက်ဖြင့်လျှို့ဝှက်ထားပါ။
သင်၏အစီအစဉ်အားလုံးအားတစ်ပြိုင်နက်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည် - app ကိုဖွင့်ရုံနှင့်မင်းလက်ထဲတွင်အချိန်ဇယားများ၊ ချိန်းဆိုမှုများ၊ သတိပေးချက်များစသည်တို့ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ စက္ကူမှတ်စုများကိုသိမ်းဆည်းထားရန်မလိုအပ်ပါ။ မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုဖြည့်ရန်မလိုပါ။
ဝဘ်ဆိုက် - www.weekplan.pro
Tags၊ ပြက္ခဒိန်၊ အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူ၊ စီစဉ်သူ၊ ဒိုင်ယာရီ၊ မှတ်စုများ၊ အစီအစဉ်၊ နေ့စဉ်၊ အစီအစဉ်၊ အပတ်၊ တစ်ပတ်အတွက်အစီအစဉ်၊ စာသားတည်းဖြတ်သူ၊ လေ့လာမှု၊ ကျောင်းနေ့စဉ်မှတ်တမ်း၊ သင်ခန်းစာများ၊ တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ၊ စနေနေ့၊ လစဉ်၊ နှစ်ပတ်လည်၊ စာသားအရောင်၊ စာသားအရွယ်၊ ပြက္ခဒိန်၊ စီစဉ်သူ၊ စီစဉ်သူ၊ အစီအစဉ်၊
ရိုးရှင်းသော mode! မှတ်စုများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စာမျက်နှာများကို scrolling လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြသနာရှိပါက၎င်းကိုချိန်ညှိချက်များတွင်ဖွင့်ပါ။
ရက်သတ္တပတ်စီမံရေးဒိုင်ယာရီ၊ စီစဉ်သူ၊ ပြက္ခဒိန်၊ နေ့စာအုပ်
50.04 ကို MB